Madaxweynaha Zimbabwe oo ka soo hormuuqday bulshadiisa (SAWIRRO) – Xeernews24
Madaxweynaha Zimbabwe oo ka soo hormuuqday bulshadiisa (SAWIRRO)
Madaxweynaha Zimbabwe, Robert Mugabe, ayaa markii ugu horeysay maanta ka soo hormuuqday bulshada reer Zimbabwe, tan iyo markii ay xabsi guri geliyeen Ciidamada Militariga, maalintii Arbacada.
Madaxweynaha Zimbabwe, ayaa maanta Magaalada Harare kaga qaybgalay xaflad qalin jebin jaamacadeed, tani waxay ahayd mid aan horey loo sii filleynin, ka dib markii tallada dalka ay la wareegeen Ciidamada Militariga, xabsi gurina ay geliyeen Madaxweyne Mugabe.
Madaxweynaha iyo Saraakiisha Militariga, ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay wada hadalo ku lahaayen Caasimadda Harare, iyadoona ay dhexdhexaadinayso Dowladda Koonfur Afrika.
Madaxweynaha, ayaa la doonaya in lagu qanciyo in uu kursiga isaga deggo, ka dib muddo 37 sano oo dalkaasi uu soo xukumaayay, inkastoo la leeyahay waa uu ka biyo diidan yahay in uu xafiiska baneeyo.
Madaxweynaha, ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay dhismaha jaamacadda, waxaana loo fidiyay roog cas. Haweenkii ka qaybgelayay xafladaasi qalin jebinta, ayaa mashxarad iyo sacab ku soo dhaweeyay, ka dibna waxaa loo qaaday heesta Calanka Zimbabwe.
Xaaladda siyaasadeed ee Zimbabwe oo markii horeba ahayd mid cakiran, ayaa ka sii dartay, markii Madaxweyne Mugabe uu toddobaadkii hore shaqada ka eryay Kuxigeenkiisii, Emmerson Mnangagwa, waxayna tani dhabaha u xaartay in militarigu soo fara-geliyo siyaasadda dalkaasi.
Robert Mugabe, Madaxweynaha Zimbabwe, ayaa qorsheynayay in xaaskiisa Grace Mugabe ay bedesho Emmerson Mnangagwa, ka dibna ay noqoto Madaxweynaha Wadanka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/Robert-Mugabe.jpg 443 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-17 16:01:512017-11-17 16:01:51Madaxweynaha Zimbabwe oo ka soo hormuuqday bulshadiisa (SAWIRRO)
Xaaladihii ugu danbeeyay Khasaaraha ka dhashay Rabshadihii ka dhacay Hargeysa... Daawasho haboon Saadaal ay Cali Xaraare iyo Mustafe martin ka baxsheen Doorashadda...